स्मार्ट लाइसेन्सका लागि तिहार पछि ट्रायल खुल्ने सम्भावना | Automotive News Nepal
स्मार्ट लाइसेन्सका लागि तिहार पछि ट्रायल खुल्ने सम्भावना २४ कार्तिक, २०७७
काठमाडौं – सवारी साधनको नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि ट्रायल कहिले खुल्ला ? यो धेरैका लागि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । तर सरकारी निकाय नै यस वारेमा अन्यौलमा रहेका छन् ।
लाइसेन्स ट्रायल अर्थात लाइसेन्सका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा गत चैत महिना पश्चात नै हुन सकेको छैन । तर हाल संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमै यस सम्बन्धमा अन्यौलता छाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा प्रदेशमातहत भएकाले प्रदेशले निर्णय गरेपछि मात्र खुला हुने बताउँदै आएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले यो कुरा प्रदेश सरकार मातहत भएकाले समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन् भने बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले भने संघीय सरकारको निर्णयअनुसार नै प्रयोगात्मक परीक्षा लिने काम बन्द गरिएको बताएका छन् । संघीय सरकारले नयाँ निर्णय नगरेसम्म खुल्ने सम्भावना न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।
हाल अत्यावश्यक सेवा मात्र संचालनमा रहेकोले कोरोना संकट वृद्धि हुँदै जाँदा धेरै भिडभाड हुने भएकाले पनि खोल्न नसकिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । तिहार पछि ट्रायल खुल्ने विषयमा पनि विषयमा पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय भएपछि मात्र निर्णय हुने प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिएका छन् ।
त्यसका लागि अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवा पनि खोल्ने संघीय सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसलाई प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गर्ने तयारी छ । सवारीसाधनको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रयोगात्मक परीक्षा नखुल्दा धेरैलाई असर परेको छ ।